के तपाई बिग ब्यापारको साथ गुगलमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ? | Martech Zone
यस लेखमा तपाईं मसँग रिसाउनु अघि कृपया यसलाई राम्ररी पढ्नुहोस्। मैले भनेको छैन कि गुगल अतुलनीय अधिग्रहण स्रोत होईन वा कि त भुक्तान गरिएको वा जैविक खोज रणनीतिमा लगानीमा मार्केटि return फिर्ती छैन। यस लेखमा मेरो कुरा यो हो कि ठूलो व्यवसाय पूर्ण रूपमा जैविक र भुक्तान गरिएको खोज परिणामहरूमाथि प्रभुत्व जमाइरहेको छ।
हामी सँधै जान्दछौं कि प्रति-क्लिक भुक्तान एक च्यानल थियो जहाँ पैसाले शासन गर्छ, यो व्यवसायको मोडेल हो। प्लेसमेन्ट सँधै सब भन्दा बढि बिडोरमा जान्छ। तर जैविक खोजी रणनीतिहरू धेरै फरक थिए। वर्षौंसम्म, हामी सान्दर्भिक र उल्लेखनीय सामग्री उत्पादन गर्न सक्षम छौं र यसलाईaद्वारा पुरस्कृत गरेका छौं नम्बर १ Google मा एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कुञ्जी श्रेणी। ती दिनहरू गयो।
राम्रो मित्र एडम सानो चलाउँछ एक घर जग्गा मार्केटिंग प्लेटफर्म। उहाँ भर्खरको न्यूयोर्क शहरमा हुनुहुन्थ्यो Inman कनेक्ट। मोज़को रान्ड फिशकिन एक वक्ता थिए र उनले आफ्नो विश्लेषणमा पत्ता लगाए कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको शीर्ष २ markets बजारमा5डोमेन शीर्ष real रियल ईस्टेट खोजीमा स्थानान्तरित छन्।
अर्को शब्दहरु मा, यदि तपाई एक रियल ईस्टेट कम्पनी हुनुहुन्छ जस मध्ये एक शहर मा एक सय वर्षको अनुभव संग, तपाईको रैंकिंगको सम्भावनाहरु डरलाग्दो छ। यो यस्तो हुन प्रयोग भएन। गुगलको जैविक खोज रैंकिंग कुनै पनि व्यवसायको लागि आश्चर्यजनक सामग्रीको विकासको लागि अवसरको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो र यसलाई पत्ता लगाइन्छ र राम्रोसँग क्रमबद्ध गरिएको हुन्छ। म भन्न सक्दिन कि यो सहजै थियो, यसले एक टन काम लियो ... तर यो सम्भव थियो।
समानवेबले यसको प्रकाशित गरेको छ २०१ for को लागि मोमेन्टम पुरस्कार। समान वेब मोमेन्टम पुरस्कारहरूले अमेरिकामा वेवसाइटलाई मान्यता दिँदछन् जसले २०१ 2016 मा उनीहरूको अनलाइन कोटीमा असाधारण प्रगति प्रदर्शन गरेका छन्। १ categories कोटिहरूमा win win विजेताहरूले सफलतापूर्वक सुधार गरेका छन् समानवेब श्रेणीकरण - एक एल्गोरिथ्म स्कोर जसले उनीहरूको कुल यातायात र स met्लग्नता मेट्रिक्स द्वारा million० मिलियन भन्दा बढि साइटहरू।
यीको विश्लेषण भित्र, तपाईंले पाउनुहुनेछ कि खोजी कम्पनीहरूको लागि सब भन्दा ठूलो गतिको साथ विशाल निर्धारणकर्ता कारक हो। यहाँ उनीहरूका पुरस्कार विजेताहरू छन्:
श्रेणी 1st 2nd 3rd
अनलाइन बजारहरू wish.com samsclub.com kmart.com
उपभोक्ता इलेक्ट्रनिक्स frys.com bestbuy.com bhphotovideo.com
परिधान rue21.com victoriassecret.com torrid.com
अनलाइन यात्रा एजेन्सीहरू Tripadvisor.com ट्राभेलोसिटि। com expedia.com
होटल चेन marriott.com चोरहोटल्स.कट ihg.com
होटल बुकिंग सेवाहरू hotel.com airbnb.com trivago.com
एयरलाइन्स jetblue.com aa.com Spirit.com
बीमा statefarm.com प्रोग्रेसिभ.कम geico.com
बैंकिंग citi.com علائقن.com नौसेना संघीय। org
कार खरीद गर्दै carmax.com autotrader.com car.com
समाचार र मीडिया पंचमहत्तरी.कट realclearpolitics.com पोलिटिकल.कॉम
टेक समाचार ccm.net news.ycombinator.com डिजिटलtrends.com
व्यापार समाचार bloomberg.com Money.cnn.com foxbusiness.com
२०१ Similar को लागि समान वेबको हाइलाइट रिपोर्ट डाउनलोड गर्नुहोस्
जहाँ केहि कम्पनीहरू छन् जसले संसारलाई शासन गर्दैनन्, यो गहिरो जेबको साथ ठूला कम्पनीहरू छन् जसले अनलाइन डिजिटल मार्केटिंगको स्वामित्व लिइरहेका छन्, तिनीहरूको जैविक खोज रैंकिंगको नेतृत्वमा। यी कम्पनीहरूले ओम्नी-च्यानल रणनीतिहरू वहन गर्न सक्दछन्, साथै महत्त्वपूर्ण भुक्तानी पदोन्नति, अत्यधिक अप्टिमाइज वेबसाइटहरू, र प्रभावकारी मार्केटिंगको साथ जोडिएको मजबूत सामग्री सहित। त्यो संयोजन महँगो छ - तर प्रतिस्पर्धालाई नष्ट गर्दछ।
यसैले साना कम्पनीहरू र प्रकाशकहरूले आफ्नो चपलतालाई उनीहरूको फाइदाको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। Google मा हावी हुने कम्पनीहरूमा हेर्दा तपाईंले तिनीहरूलाई नक्कल गर्नु हुँदैन। तपाईंले उनीहरूबाट आफूलाई अलग देख्नु पर्दछ, अभियानहरू कार्यान्वयन गर्न पनि खोज्दै सामग्री सामग्री जुन उनीहरूले कहिल्यै जोखिम गर्दैनन्। तपाइँका दर्शकहरू अझै केहि फरकको लागि भोकमरीमा छन् - तपाईं कसरी भिन्न हुन सक्नुहुन्छ? यदि तपाईं गुगलमा प्रतिस्पर्धा माथि रैक गर्न सक्नुहुन्न भने, कम्तिमा तपाईं अझै पनि सामाजिकमा निर्भर रहन सक्नुहुन्छ तपाईंको सन्देश प्रवर्धन गर्न।
यसैले हाम्रो ग्राहकहरूको लागि मुख्य रणनीति अनुसन्धान र विकासको निरन्तर रहेको छ अनौपचारिक, एनिमेटेड ग्राफिक्स, र सेतो कागजहरू। राम्रो अनुसन्धान गरिएको, सुन्दर, र मूल्यवान सामग्रीको अंश तपाईंको कम्पनीमा ध्यान र अधिकार चलाउन जारी हुनेछ। तपाई र्याक गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाई साझेदारी हुनुहुनेछ र तपाईले खोजिरहनु भएको प्रासंगिक दर्शकहरूले भेट्टाउनुहुनेछ।
टैग: 2016एजेन्ट सॉसGoogle +अमानवीयगति पुरस्कारकेटाजैविक खोजभुक्तान गरिएको खोजीरान्ड फिशकिनर्याङ्किङ्गघर जग्गा मार्केटिंगसमान
एसईओ आइसबर्ग: अर्गानिक खोजीमा प्रभाव पार्ने लुकेका कारकहरू नेभिगेट गर्नुहोस्